MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Farmaajo ayaa saaka oo Axad ah dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, kadib markii uu soo afjaray booqashadiisii dalka Masar.
Wafdiga Madaxweynaha waxaa Garoonka Aadan Cabdulle kusoo dhaweeyay Wasiirro, Xildhibaanno iyo Madax kale oo katirsan labada Golle ee dowladda Federaalka Soomaaliya.
Farmaajo Saxaafadda lama uusan hadlin markii uu kasoo dagay Garoonka.
Madaxweynaha ayaa kasoo qeybgalay Shirka labaad ee Ganacsiga Africa oo sanadkan 2017 lagu qabtay magaalada xeebta ku taalla ee Sharmal Al-Sheekh, dalka Masar kaasi oo diirada lagu saaray maalgashiga iyo horumarinta ganacsiga qaaradda.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dowladdiisa ay ka go'an tahay inay abuurta jawi nabad ah oo u suurta gelinaya caalamka inuu maalgashado, isagoo hoosta ka xaqiiqay in Soomaaliya ay leedahay xeebta ugu dheer Africa iyo khayraad badan oo dhulka ah.
Waa booqashadii labaad oo Farmaajo ku tago Masar tan iyo bishii August ee sanadkan.
Waxa uu Madaxweynaha uga soo tagey Masar xubno la socday wafdigiisa oo uu kamid yahay Yuusuf Garaad, oo ka qeybgalaya shir deg deg ah oo wasiirada arrimaha dibadda Jaamacadda Carabta ku leeyihiin Qaahira kaasi oo looga hadlay go'aankii Trumo ee Qudus.
Wasiirada ayaa la filayaa in shirkooda kasoo saaraan go'aan midaysan oo ku aadan arinta Qudus iyo aqoonsiga Trumo u aqoonsaday magaaladaasi bakaraysan inay tahay caasimadda Israel.
Dibadbax ka dhan ah Go'aankii Trump ee Qudus oo ka dhacay Muqdisho
Soomaliya 08.12.2017. 22:23